Ukufundelwa ukubukela okanye uthotho lokufunda. Ukhetho | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Akukho xesha linje nge ehlobo for fumana ukufundwa okanye uhlengahlengiso lwakho kwiscreen esincinci. Bambalwa kwaye baninzi nangaphezulu kwilog yokuphendula eyenzeka phakathi koncwadi kunye nefilimu okanye umabonwakude. Kwaye kula maxesha, kunye okanye ngaphandle kweemeko ezizodwa, le yokugqibela iphumelele ngobuchwephesha nangokwamanani ngokuphumelela into ethathwe kwi-cinema. Olu lukhetho lwam (olufutshane) lwamanqaku amane eguqula imisebenzi ngababhali njengefanelekileyo njengamakhaya UMaría Dueñas kunye noFernando J. Muñez kunye namaMelika UHarlan Coben noMichael Connelly.
1 Umpheki kaCastamar - uFernando J. Muñez
2 Ubushushu - uMaría Dueñas
3 Abangenatyala - uHarlan Coben
4 I-Bosch (Ixesha le-7) -Igumbi elitshisayo-uMichael Connelly
Umpheki kaCastamar -UFernando J. Muñez
UFernando J. Múñez akanakwenza ngcono. Ngomsebenzi wakhe wokubhala waqala ngo-2002 kwihlabathi le- uncwadi lwabantwana nolutsha, apho anembali ende, kwiminyaka emibini edlulileyo wapapasha inoveli yakhe yokuqala eyenzelwe abantu abadala, Umpheki kaCastamar, ngempumelelo enkulu kangangokuba isiwe kumabonwakude, ivuna enye efana nayo. Kwaye kulo nyaka kubonisiwe Amanyathelo alishumi.
Kodwa masithi ulungelelwaniso lwakho, lwe Izahluko ezi-12Ibe ngaphezulu kokukhululeka ngokubhekisele kwincwadi yoqobo, into edla ngokwenzeka kwelinye icala. Nangona kunjalo, ifayile ye- imveliso ngenyameko kakhulu Umabonwakude, oneshishini elilungileyo nelinomtsalane kunye nesinxibo kunye noseto lobunewunewu, ulungelelanise intsalela phakathi kwabafundi nababukeli ngaphandle kwezalathiso. Ewe kunjalo, kuya kufuneka unike ingqalelo yokuqwalaselwa kwezi zihluzo ze-sepia kwimifanekiso. Kwaye yintoni esalindelekileyo kubadlali bethu abancinci, masithi: the Isichazi-magama.
Ukuphumla kunokubonwa ngokuthuthuzela, ngakumbi eyona palate intle kwaye bathande uthotho lweediliya.
En I-A3 Media kunye neNetflix.
Ubushushu - UMaria Dueñas
Phantse akukho msebenzi kaMaría Dueñas ongabi luthotho. Lo ngomnye umzekelo womsebenzi olungileyo kunye nempumelelo ephinda emva Ixesha phakathi kwemisonto oko kwamnika udumo. Kwakhona ukusuka imveliso yeediliya entle, ngaphandle kokuchitha iindleko kwizinto zangaphandle nolonwabo, Ubushushu hlanganisa abadlali bamanye amazwe ekhokelwa ngabalinganiswa abaphambili, iSpanish Eleanor Watling kunye necolombian URafael Novoa, abajongeka bahle kakhulu kwindima yabo, kwaye abo bahamba nesekondari enkulu njengoEmilio Gutiérrez Caba phakathi kwabanye.
Ukuba kufuneka ubeke kodwa ngokukodwa umbukeli akanalwazi kakhulu kulwimi lweShakespeare, isenokuba yinyani yokuba Inxalenye yencoko yababini ngesiNgesi kwaye kuya kufuneka ujikeleze ufunda imibhalo engezantsi. Kodwa ke yeyona nto incinci. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba yimveliso elungileyo kakhulu malunga nebali lothando, ukuthanda kunye nokuthandabuza.
Abamsulwa -Harlan Coben
UHarlan Coben, ukongeza ekubeni ngu kakhulu Njengombhali, unethamsanqa lokuba inoveli enye ilungiselelwe yena, kwaye enye ikwahlengahlengiswa kuwo onke amazwekazi nakwiilwimi. ungathethi nabantu ongabaziyo, Safe o Ihlathi ngaphakathi, konke kwiNetflix ngumzekelo. Ngoku lithuba lethu kolu ngcelele lweSpanish Izahluko ezi-8 ngubani odlala phambili UMario Casas, UAura Garrido y UJose Coronado phakathi kwabanye.
Ndiyathemba ukuba ngenye imini uthotho lwakhe lokuzonwabisa lweenoveli malunga UMyron bolitar.
Bosch (Ixesha lesi-7) - Igumbi elitshayo -UMichael Connelly
Ifandesi kwisitayile ukuya Olunye lothotho lwamapolisa olulungileyo oko kunokubonwa ngoku kumaqonga. Besele ndithethile ngaye kweli nqaku. Ngoku bayayiphelisa, nangona kungenjalo ngokupheleleyo, ngeli xesha le-7 elingabaphoxi ababukeli kunye nabafundi abalandele uthotho ngokuzinikela. Eli xesha lihlengahlengisa icandelo lesakhiwo soncwadi lwantlandlolo Igumbi elitshayo, i inombolo 19 yesaga ende nephumeleleyo Ukujongana nepolisa elibi kakhulu, elisebenzayo nelinyanzelekileyo UHarry bosch, kwakhona entle UTito welliver.
Ngaba abanye Izahluko ezi-8 Imizuzu engama-45 ebonwa kwimarathon ngokuzolileyo apho akukho sicwangciso okanye umgca wedeshini oshiyekileyo. Ngamafutshane, hayi umzuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli yothando » Ukufundelwa ukubukela okanye uthotho lokufunda. Ukhetho
Igama le rose